TAORIAN’NY BIANCO : Natolotra ny “chaine pénale anti-corruption” i Claudine Razaimamonjy
Ny Zoma tamin’ny 12 ora mitataovovonana no tonga tetsy amin’ny “chaine penale anti-corruption” i Claudine Razaimamonjy sy ny avy ao amin’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly na Bianco, rehefa avy notazonina teny amin’ny Bianco nandritra ny roa andro izy. 9 avril 2017
Tonga maro teny an-toerana ireo andian’olona avy any Fianarantsoa sy ny mpomba azy, ny Loholona sy ny Solombavambahoaka avy ao amin’ny fitondrana. Hatreto anefa dia mbola tsy voafaritra mazava ny vesatra anenjehana azy fa ny fantatra kosa dia nisy fitoriana azy tonga teny amin’ny Bianco. Tsy azon’ny mpanao gazety nidirana ny teny an-toerana, toa izay ihany koa ireo mpiara-dia tamin’ity mpandraharaha voasambotra ity.
Tsiahivana fa notazonin’ny Bianco 48 ora ary natao fanadihadiana ity mpandraharaha mpanefoefo akaiky ny Filoham-pirenena misady. Tapitra ny fe-potoana nitazonan’ny Bianco azy dia izao natolotra ny rafi-pitsarana misahana manokana ny ady amin’ny kolikoly teny 67ha, omaly izao.
Ankilany mbola tonga teny an-toerana ihany koa ireo andian’olona voakarama mitaky ny hamotsorana tsy misy hatak’andro an’i Claudine Razaimamonjy. Hentitra kosa anefa ny fiambenana teny 67ha nataon’ny mpitandro ny filaminana avy amin’ny Emmo/Sécurité.
Mpanolotsain’ny Filoham-pirenena roa voaantso eny amin’ny Bianco
Araka ny vaovao voaray, taorian’i Claudine Razaimamonjy izay nosamborin’ny teo anivon’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly na ny Bianco sy nanaovana fanadihadiana taminy, dia fantatra fa Mpanolotsaina ny Filoham-pirenena roa ihany koa no voaantso teny amin’ny Bianco.
« Voarara ihany koa ny tsy fahazoan’izy ireo mivoaka ny faritany », hoy ny fanazavana. Hatreto, dia mbola tsy fantatra mazava ny antony nampiantsoana ireto Mpanolotsain’ny Filoham-pirenena roa hafa ireto. Mikasika an’i Claudine Razaimamonjy kosa indray dia mbola tsaboina eny amin’ny Hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona, hatramin’ny anio ity farany. Araka ny fantatra, dia mbola tsy notanana am-ponja vonjimaika izy taorian’ny fakana am-bavany azy teny amin’ny Fampanoavana manokana misahana ny kolikoly tetsy 67ha, ny herinandro lasa teo, noho ny voalaza fa fiakaran’ny tosi-drany, ka izay no antony nampidirana azy teny amin’io hopitaly io.
Mbola tsy voafaritra kosa anefa hoe rahoviana izy no hivoaka eny.
Tsiahivana, fa rehefa notazonina 48 ora sy nalaina am-bavany tao amin’ny Bianco ity mpandraharaha sady Mpanolotsaina ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ity, dia natolotra ny “Chaine Pénale anti-corruption” tetsy 67ha. Taorian’izay no nahafantarana fa tokony haiditra am-ponja vonjimaika izy, kanjo niakatra tampoka ny tosi-drany ary izao mbola tsaboina ao amin’ny Hjra Ampefiloha izao. Andrasana ny mety ho tohin’ny raharaha.